အလူမီနီရှဲလ်နဲ့ LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်,LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်ရင်းမြစ်,LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်လူမီနီယမ်ရှဲလ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး > LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ် > အလူမီနီရှဲလ်နဲ့ LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်လက်ဆေးမြို့ရိုးကိုဆီမီးခွက် LED, ရေကဲ့သို့အလင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အလှဆင်အလင်းရောင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လည်းကြီးမားသောအဆောက်အဦကိုဖျောပွဖို့အသုံးပြုအတှကျအသုံးပွု, တန်တိုင်းရိုးကိုလျှော်ကြကုန်အံ့။
LED ကိုစွမ်းအင်ချွေတာမြင့်မားတောက်ပထိရောက်မှု, ကြွယ်ဝသောအရောင်နှင့်ရှည်လျားသောအသက်တာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးကတည်းကအခြားအလင်းသတင်းရင်းမြစ်၏အဝတ်လျှော်မြို့ရိုးကိုမီးခွက်သည်တဖြည်းဖြည်း 2013 ခုနှစ်နဲ့ LED အဝတ်လျှော်မြို့ရိုးကိုဆီမီးခွက်များဖြင့်အစားထိုးသည်။
Led အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်, Led အမှတ်တရအဝတ်လျှော်အလင်းကရိယာ, Led အမှတ်တရအဝတ်လျှော်ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Led အမှတ်တရအဝတ်လျှော်အလင်းထုတ်ကုန်များ, အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး, အဆောက်အအုံ Lighting, အဆောက်အအုံ Lighting ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ, အဆောက်အအုံ Lighting ဒီဇိုင်း
ဖေါ်ပြချက် ၏ ထုတ်ကုန်
1. ရိုးရှင်းပြီးရက်ရက်ရောရောအဆိုပါဆီမီးခွက်ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဒီဇိုင်း, အသွင်အပြင်အသေးစားနှင့်လက်ရာမြောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
2. အဆိုပါ shell ကိုလူမီနီယံအလွိုင်းဆီမီးခွက်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍမှိုကိုနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်။
3. အထူးဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းဟာကောင်းသောအပူလွန်ကျူးအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာ, ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ LED အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလငျးကို attenuation လျော့နည်းစေနှင့်, ရောထွေးအလင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
4. လူပျိုပါဝါ LED: 1W
5.Lamp တစ်သက်တာ: 20000hours
6.LED အရောင်: အပြည့်အဝအရောင်သို့မဟုတ်မိုနိုခရုမ်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ 7.Level: IP65
8.Electrical ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဘော်ဒါ: DC24V, Ⅲမျိုး
မီးခွက်၏ 9.ries: ပါဝါ, 18W ~ 48W အကြား applications များအမျိုးမျိုးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ်။
·ပင်မပစ္စည်း: အမြင့် - ဖိအားကိုနှင်ထုတ်လူမီနီယမ်မြင့်မား - အလင်းအစွန်းရောက် - အဖြူရောင်ဖန်ထည်, နောက်ကျောလျှံနှောင့်နှေးကို ABS,
· Surface ကကုသမှု: ခရမ်းလွန် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း;
·အကာအကှယျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ: silica gel ဟာလက်စွပ်ရေစိုခံ compacted;
·ပျမ်းမျှတစ်သက်တာ: 350mA20000hours, 500mA15000hours;
·ထိန်းချုပ်ရေးမုဒ်: CC ကို / DMX512;
· Operating အပူချိန်: -25 ℃ ~ 50 ℃
·အဆိုပါအလင်းရောင်စုံအပူချိန်: အနီရောင် / စိမ်းလန်း / အဝါရောင် / Amber / မိုးပြီးမှ / အက်ဆစ်အပြာ / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
·အလင်းဖြန့်ဖြူး device ကို: Optical မှန်ဘီလူးစီးရီး: 8 ° / 15 ° / 25 ° / 45 ° / 10 × 30 ရက်° / 10 × 60 ° / 20 × 40 °
လူပျိုဦး / ကိုနှစ်ချက်ဦး Adjustments angle bracket: install လုပ်ဖို့· Way ကို
·အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆ: 10% ~ 90%
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး > LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်
Die-သွန်းလူမီနီယမ်နဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ်ဌာနမှူး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ် LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်ရင်းမြစ် LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်လူမီနီယမ်ရှဲလ် LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်အလင်း ဦးဆောင်အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်